IBhayibheli laqokelelwa ngumuntu, hhayi uNkulunkulu; iBhayibheli alikwazi ukumela uNkulunkulu. | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Phambilini, abantu bakwa-Israyeli babefunda iTestamente Elidala kuphela. Okungukuthi, ekuqaleni kweNkathi Yomusa abantu babefunda iTestamente Elidala. ITestamente Elisha lavela kuphela ngeNkathi Yomusa. ITestamente Elisha labe lingekho ngesikhathi uJesu esebenza; abantu emuva kokuvuka nokunyukela Kwakhe ezulwini babhala phansi umsebenzi Wakhe. Yilapho kuphela kwaba khona amaVangeli Amane, ukwengeza kulokho, kwakukhona izincwadi zikaPawulu noPetru, kanye neNcwadi yeSambulo. Emuva kweminyaka engaphezu kwama-300 uJesu enyukela ezulwini, yilapho kuphela izizukulwane ezalandela zaqoqa ndawonye imibhalo, kwaba khona iTestamente Elisha. Kuphela emuva kokuthi lo msebenzi wabe sewuqediwe, kwaba khona iTestamente Elisha; lalingazange libe khona phambilini. UNkulunkulu wayekade enze wonke loya msebenzi, umphostoli uPawulu wayekade enze wonke loya msebenzi futhi emva kwalokho izincwadi zikaPawulu noPetru zihlangene, kanye nombono omkhulu kakhulu owabhalwa nguJohane esiqhingini sasePhatimose wabekwa ekugcineni, ngoba wawuphrofetha umsebenzi wezinsuku zokugcina. Lokhu konke kwabe kungukuhlela kwezizukulwane ezeza kamuva, futhi kuhlukile kunamazwi anamhlanje. Okubhalwe namuhla kuhambisana nezinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu; lokho abantu ababhekana nakho namhlanje umsebenzi owenziwe nguNkulunkulu mathupha, namazwi akhulunywe nguye mathupha. Awudingi ukugxambukela—amazwi asuka kuMoya oNgcwele ngqo, ahleliwe isinyathelo ngesinyathelo, futhi ahlukile kunamalungiselelo emibhalo yomuntu. Lokho abakubhala, kungathiwa, kwakuhambisana nezinga le mfundo nezinga lomuntu lokukhalipha. Ababekubhala kwabe kuyilokho abantu ababedlule kukho, futhi ngamunye babenezindlela zabo zokubhala nokwazi, futhi umbhalo ngamunye wabe uhlukile. Ngakho, uma ukhonza iBhayibheli njengoNkulunkulu uwunalwazi futhi uyisiphukuphuku ngokwedlulele!
Kucashunwe “Ekupheleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Okwedlule：Umhlaba okholwayo ukholwa ukuthi yonke imibhalo inikezwe ngokufunzelelwa nguNkulunkulu nokuthi konke kungamazwi kaNkulunkulu; ingabe umuntu kufanele ahlaluke kanjani lesi sitatimende?
Okulandelayo：Ayikho indlela yokuphila okungunaphakade ngaphakathi eBhayibhelini; uma umuntu ebambelela eBhayibhelini futhi alikhonze, lapho-ke ngeke akuthole ukuphila okungunaphakade.
Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu.
1.Ukuhlwithwa kufanele kusekelwe emazwini kaNkulunkulu futhi hhayi emicabangweni nasebucikweni bomuntu Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Baba wethu os…
5. Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: …